အိမ်တွင်းက အနံ့ဆိုးတွေကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားကြမယ်…. - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
အိမ်တွင်းက အနံ့ဆိုးတွေကို အလွယ်တကူဖယ်ရှားကြမယ်….
30 Jun 2020 12:29 pm တြင္ တင္ခဲ့သည္
9693 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
အနံ့ဆိုးတွေက သင့်အိမ်ရဲ့ လေထုကို ညစ်ညမ်းစေပြီး မိသားစုတွေ နေအိမ်မှာ သက်တောင့်သက်သာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ရဖို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မီးဖိုချောင်၊ စားဖိုဆောင်နဲ့ ဂိုထောင် အစရှိသဖြင့်နဲ့ အိမ်တွင်းနေရာတွေက ထွက်ရှိလာတဲ့ အနံ့ဆိုးတွေက နေအိမ်တွင်းမှာ ပျံ့နှံ့ကာ အနံ့စွဲကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အနံ့တွေ၊ ဆေးလိပ်၊ မီးခိုးအနံ့တွေနဲ့ တခြား အညစ်အကြေးတွေက ထွက်ရှိလာတဲ့ အနံ့အသက်ဆိုးတွေ အစရှိသဖြင့်တွေကို ပျောက်ကင်းသွားအောင်ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ လေကောင်းလေသန့် ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီး အခန်းတွင်းလေထုသန့်စင်အောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့ နည်းလမ်းကလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
၁။ ဗီနီဂါ၊ မီးဖိုချောင်သုံး ရှာလကာရည်က အနံ့သက်ဆိုးတွေကို စုပ်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ လေထုသန့်စင်မှု ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အသင့် တော်ဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းက အနံ့သက်ဆိုးတွေကို စုပ်ယူနိုင်တဲ့ သဘာဝသတ္တိရှိပြီးတော့ အညစ်အကြေးနဲ့ အခိုးအငွေ့ တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဇလုံတစ်ခုထဲကို ရှာလကာရည်နဲ့ ပန်းသီးစိမ်းဖျော်ရည်တို့ထည့်ပြီး အခန်းတွင်းထားရှိပေးမယ်ဆိုရင် အနံ့ဆိုးတွေ ကင်းဝေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါကလည်း မိသားစုတော်တော်များများ အသုံးပြုကြတဲ့ အိမ်တွင်း အနံ့သက်ဆိုးပျောက်တဲ့ အိမ်တွင်းပစ္စည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ရေခဲသေတ္တာတွေ၊ ကြောင်အိမ်နဲ့ မီးဖိုချောင်နေရာတွေမှာ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါထားရှိပေးမယ်ဆိုရင် အနံ့ဆိုးတွေနဲ့ အချိန်ကြာစွဲနေတဲ့ အနံ့တွေ၊ ဟင်းနံ့နဲ့ တခြားဆိုးရွားတဲ့ အနံ့အသက်တွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
၃။ မီးသွေးတုံး၊ ကောင်းမွန်ပြီး မီးမလောင်ကျွမ်းရသေးတဲ့ မီးသွေးတုံးအသစ်တွေက အနံ့အသက်စုပ်ယူမှုအားကောင်းပါတယ်။ အနံ့ဆိုးတွေထွက်ရှိလာတဲ့ နေရာတွေမှာ မီးသွေးတုံး တွေကို ထားရှိပေးခြင်းအားဖြင့် အနံ့အသက်တွေကို စုပ်ယူကင်းစင် စေနိုင်ပါတယ်။ စုပ်ယူအားကောင်းမွန်တဲ့ မီးသွေးအစိုင်အခဲတုံးဆိုရင် ဒီအနံ့အသက်ဆိုးတွေကို နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အိမ္တြင္းက အနံ႔ဆိုးေတြကုိ အလြယ္တကူဖယ္ရွားၾကမယ္….
အနံ႔ဆုိးေတြက သင့္အိမ္ရဲ႕ ေလထုကုိ ညစ္ညမ္းေစၿပီး မိသားစုေတြ ေနအိမ္မွာ သက္ေတာင့္သက္သာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ရဖုိ႔ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ မီးဖုိေခ်ာင္၊ စားဖုိေဆာင္နဲ႔ ဂုိေထာင္ အစရွိသျဖင့္နဲ႔ အိမ္တြင္းေနရာေတြက ထြက္ရွိလာတဲ့ အနံ႔ဆိုးေတြက ေနအိမ္တြင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ကာ အနံ႔စြဲက်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္အနံ႔ေတြ၊ ေဆးလိပ္၊ မီးခုိးအနံ႔ေတြနဲ႔ တျခား အညစ္အေၾကးေတြက ထြက္ရွိလာတဲ့ အနံ႔အသက္ဆိုးေတြ အစရွိသျဖင့္ေတြကုိ ေပ်ာက္ကင္းသြားေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ႔နဲ႔ ေလေကာင္းေလသန္႔ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ၿပီး အခန္းတြင္းေလထုသန္႔စင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ နည္းလမ္းကေလးေတြ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္…..
၁။ ဗီနီဂါ၊ မီးဖုိေခ်ာင္သံုး ရွာလကာရည္က အနံ႔သက္ဆိုးေတြကုိ စုပ္ယူဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ ေလထုသန္႔စင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အသင့္ ေတာ္ဆံုးပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းက အနံ႔သက္ဆိုးေတြကုိ စုပ္ယူႏုိင္တဲ့ သဘာဝသတၱိရွိၿပီးေတာ့ အညစ္အေၾကးနဲ႔ အခုိးအေငြ႔ ေတြကုိလည္း ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဇလံုတစ္ခုထဲကုိ ရွာလကာရည္နဲ႔ ပန္းသီးစိမ္းေဖ်ာ္ရည္တုိ႔ထည့္ၿပီး အခန္းတြင္းထားရွိေပးမယ္ဆုိရင္ အနံ႔ဆုိးေတြ ကင္းေဝးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။
၂။ မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါကလည္း မိသားစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳၾကတဲ့ အိမ္တြင္း အနံ႔သက္ဆိုးေပ်ာက္တဲ့ အိမ္တြင္းပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ေရခဲေသတၱာေတြ၊ ေၾကာင္အိမ္နဲ႔ မီးဖုိေခ်ာင္ေနရာေတြမွာ မုန္႔ ဖုတ္ေဆာ္ဒါထားရွိေပးမယ္ဆုိရင္ အနံ႔ဆုိးေတြနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာစြဲေနတဲ့ အနံ႔ေတြ၊ ဟင္းနံ႔နဲ႔ တျခားဆိုးရြားတဲ့ အနံ႔အသက္ေတြကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ပါတယ္။
၃။ မီးေသြးတံုး၊ ေကာင္းမြန္ၿပီး မီးမေလာင္ကၽြမ္းရေသးတဲ့ မီးေသြးတံုးအသစ္ေတြက အနံ႔အသက္စုပ္ယူမႈအားေကာင္းပါတယ္။ အန႔ံဆိုးေတြထြက္ရွိလာတဲ့ ေနရာေတြမွာ မီးေသြးတံုး ေတြကုိ ထားရွိေပးျခင္းအားျဖင့္ အနံ႔အသက္ေတြကုိ စုပ္ယူကင္းစင္ ေစႏုိင္ပါတယ္။ စုပ္ယူအားေကာင္းမြန္တဲ့ မီးေသြးအစုိင္အခဲတံုးဆုိရင္ ဒီအနံ႔အသက္ဆိုးေတြကုိ ႏွစ္ရက္သံုးရက္အတြင္းနဲ႕ ေပ်ာက္ကင္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
ကိတ္တိမ မွေးစားသားသမီးအဖြစ် မောင်နှမအချင်းချင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသလား
သင့်အိမ်ရဲ့ ရေဆင်းပိုက်တွေနဲ့ နံရံအက်ကြောင်းတွေကို ဂရုစိုက်ပါ
အိမ်ငှားမယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်ပြီးမှ ငှားပါ
ကနေဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ပြောပြသော ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူအများစုလုပ်တတ်သည့် အကြီးမားဆုံးအမှား...
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၈) ခုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအတည်ပြုပေးခဲ့...
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် မီးဖိုဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အချက် (၅) ရပ်...
ဘီးလပ်မြေး အိပ်၁၀၀ အုပ်၄၀၀၀ လက်ဆောင်ပါမည်
25'x60' နှစ် 60 ဂရန်​မြေနှင့် RC 1ထပ်အိမ် ​ရောင်းမည်
အထက်ပုစွန်တောင်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်6ထပ်တိုက်...
ပထမထပ်. အခန်းကျယ် စိန်ဂေဟာအနီး
အလုံ အောက်ကြည့်မြင်တိုင် လမ်းမ အနီး ငုဝါလမ်းရှိ...